मामाको गीत गाउने बाकस - Aksharang
पुराना कुरा२०७६ फागुन ५ सोमबार
हाम्रो गाउँमा एक साँझ एउटा अचम्मको बाकस आयो । सानो चिटिक्क परेको त्यो बाकस आजको ल्यापटप जत्रै तर चारपाटे आकारको थियो । त्यो ल्याउने व्यक्ति थिए कान्छा खत्री । उनी गाउँमा यही नामले तिनिन्थे । गाउँमा प्राय हरेकको एउटा न एउटा उपनाम हुन्छ र गाउँमा त्यही नाम नै उसको चिनारी हुन्छ । खान्छा खत्रीलाई हामी कान्छा मामा भन्थ्यौँ । त्यस बेला यस्तै २०/२५ घरको हाम्रो एउटा सानो बस्ती थियो । कान्छा मामाले त्यो अचम्मको बाकस ल्याएको गाइँगुइँ एकै छिनमा एक कान, दुई कान, मैदान भइहाल्यो । किनभने त्यो चानचुने बाकस थिएन । त्यसले मानिसले जस्तै गाउँथ्यो । गाउँथ्यो मात्र होइन अनेकौँ बाजागाजा पनि त्यसले बजाउँथ्यो । त्यो बाकस हामीले त्यस बेला किताबमा पढेको जादुगर अलाउद्दिनको झोलाजस्तो हुनपुग्यो ।
हाम्रो घर गाउँको अलि पुछारमा थियो । खत्री मामाको घर गाउँको ठ्याक्कै सिरानमा । गाइँगुइँ सुन्ना साथ हामी केटाकेटीहरू बेत्तोडले कुदेर तिनको आगनमा पुग्यौँ । तिनले बाकस खोलिसकेका थिए । हामी बाकसका वरिपरि सेलरोटी जस्तो गोलाकार बनाएर थ्याच्च भुइँमा बस्यौँ । बासक भित्र एउटा गोलो थालजस्तो बस्तु थियो । त्यसको बीचमा माथितिर फर्केको धातुको एउटा सानो टुसो थियो । तिनले झोलाबाट बीचमा दुलो भएको एउटा कालो रिकापीजस्तो चीज झिके र कपडाले पुछपाछ पारेर त्यस टुसोमा थपक्क छिराए । त्यतिबेलाका जिपगाडी स्टार्ट गर्न घुसारेर हान्नेजस्तो बाकसको बाहिरतिर जोडिएको तर गाडीको भन्दा धेरै सानो ह्यान्डिलको आकारमा बाङ्गिएको एउटा बस्तु थियो । मामाले त्यसलाई घुमाएर दम दिन थाले । केही बेर दम दिएपछि त्यो कालो रिकापी फनन्न घुम्न थाल्यो । अनि तिनले त्यसको किनारमा एउटा सानो टाउको भएको यन्त्रमा लुगा सिलाउनेजस्तै मसिनो सिर्यो घुसाएर कसे र त्यसलाई अत्यन्त जतन साथ त्यस रिकापीको किनारमा राखे । अनि हामीलाई खपी नसक्नु आश्चर्य भयो । त्यसले त गाउन पो थाल्यो बा !
हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा
गम्केर बज खैजडी, झम्केर नाच मुजुरा
सगरमाथि चम्किने नेपाली तारा तेन्जिङलाई
छक्कै परी विश्वले स्याबासी दिन्छ हेर भाइ
यस आश्चर्यले हामीलाई निकै पछिसम्म पछ्याइरह्यो । त्यसमा अरू गीतहरू पनि थिए । तर खत्री मामाले ‘भो आजलाई पुग्यो, रात परिसक्यो अब जाओ आ–आफ्ना घर’ भनेर त्यस दिनको कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गरे । अनि हामीलाई तेन्जिङ शेर्पाले हिमाल चढेको बढाइँमा लयमा सुसेल्दै हामी घर फर्कियौँ ।
बेलुकाबेलुका जब खत्री मामा फुर्सदमा हुन्थे उनी त्यही रिकापी बजाउँदै उपरखुट्टी लगाएर चुर बेरेर तान्दै निमग्न भएर सुन्थे । हामी भुराभुरी त्यही मौकाको फाइदा उठाएर रिकापीले बजाएको गीत सुन्थ्यौँ । तर त्यहाँ त्यो कालो रिकापीबाहेक केही थिएन । न गाउने गायक थियो, न यति धेरै बाजागाजा बजाउने मानिसहरू नै थिए । रेकर्डमा एउटा ठ्वाङे माइकको चित्र बनाइएको थियो । र त्यसैतिर फर्केर टाउको उठाइरहेको एउटा कुकुर पनि थियो । सुरुसुरुमा त यो कुकुर नै गीत गाउँछ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो । तर कुकुर चित्रबाट कतै चलमल नगरेपछि कुकुरले होइन मानिसले नै गाउने रहेछने भन्नेसम्म बुझ्यौँ । तर धेरै दिनसम्म पनि हामीलाई त्यो भाँडो बजेकोको आश्चर्य पर्गेलिनसक्नु रहस्य भएर मथिङगलमा त्यही रिकापी घुमेजस्तो फन्को मारिरहेको थियो । तर त्यो सुनिरहँदाको सुखानुभूति र आनन्द यति पराकाष्टामा पुग्थ्यो– सुन्दासुन्दै हामी त्या भाँडोको अस्तित्व भुलेर गीतको लय–सुरमा डुब्थ्यौँ । तर दिनैपिच्छे सुन्दै जाँदा त्यसप्रतिको कौतूहल अझ धेरै मात्रामा जागृत हुँदैगयो । हामीले कोल्टिँदै त्यो भाँडोवरिपरि हे¥यौँ र त्यसमाथि आफूले जानेसम्म शोध–अनुसन्धान ग¥यौँ । मरिगए भेउ पाउन सकेनौँ । खत्री मामाले यति दामी बाकस केटाकेटीले छोएर बिनाबित्थामा बिगार्लान् भन्ने संशयले धेरैबेर छेउछाउमा ठिम्किन पनि दिँदैनथे । हामी परैबाट सुन्थ्यौँ । तर त्यसको रहस्य ती मामालाई पनि थाहा भएजस्तो हामीलाई लागेन । उनी गीत बजाइसकेपछि त्यो भाँडोलाई बट्टा बन्द गर्थे र बज्ने रिकापीलाई कपडाले पुछेर कुडको प्याकेटमा हाल्थे । अनि हामी जानेसम्म त्यो गाउँदै हिँड्न थाल्यौँ–
चुचुरामा बसेर खायो भाले कुखुरा
निकैपछि मात्र थाहा भयो– यो गीत जनकविकेशरी धर्मराज थापाले लेखेर आफैँले गाएका रहेछन् र गीतमा उनले तेन्जिङलाई भाले कुखुरा पनि खुवाएका होइन रहेछन् । मामासँग एउटै रिकापी थियो र बेलुका काम धन्दा सकेपछि त्यसैलाई ओल्टाइपल्टाइ बजाउँथे ।
अलि पछि हाम्रो गाउँमा एकजना मास्टर आएर । तिनी अलि दुनियाँ बुझेका मानिस रहेछन् । तिनैले यसको रहस्योद्घाटन गरिदिए । त्यो रहेछ ग्रामोफोन । हामी यसलाई फुनुबाजा भन्थ्यौँ । पनि शिाबटुलोहरूमा यस्ता बाजाहरू छ्यापछ्यप्ती भए र हाम्रा गाउँघर हिन्दी गीतले गुञ्जायमान हुनथाले ।
त्यसिखेर नेपाली गीतको रेकर्ड कोलकातामा हुन्थ्यो । रेडियो नेपाल त थियो तर त्यसले कलाकारहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर प्रत्यक्ष गाउन लगाउँदो रहेछ । आफूले गाएको गीत गायक–गायिकाले पनि सुन्न पाउँदैन थिए । उनीहरू आफूले गाएको गीतको प्रशंसा ती गीत रेडियोमा सुनेकाहरूको मुखबाट सुनेर मख्ख पर्थे । गायक–गायिकाहरू कोलकाताको एचएमभी (हिज मास्टर भ्वाइस) मा गएर गीत रेकर्ड गर्थे र त्यो लाहाको रेकर्डमा हिजोआजको सीडीमा जस्तो गीत भरेर ल्याउँथे र रेडियो नेपालबाट प्रसारण गराउँथे ।
त्यतिबेला आजजस्तो युट्युबको त कल्पनै थिएन । क्यासेटको चलन पनि तीसको दशकको अन्त्यतिर रत्न रेकर्डिङ् संस्थाको उदय भएपश्चात् मात्र सुरु भएको हो । पछि निजी स्तरमा खुलेको म्युजिक नेपालले यसलाई जनजनसम्म पु¥याउने महायज्ञ नै ग¥यो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सीडीको त झन् कुरै नगरौँ । यसको चलन सुरु भएको हिजोअस्ति जस्तो लाग्छ । तर राम्रोसँग बजारमा छाउनै नपाई गायब भयो ।
ग्रामोफोन रेकर्डका प्लेटमाथि मखमली रातो, नीलो या हरियो रङको कपडा ओछ्याइएको हुन्थ्यो । त्यसमा डिस्क हाल्नुहघि दम दिइन्थ्यो र त्यसैको छेउमा रहेको एउटा सानो स्विजलाई थिचेर घुम्न बन्द गरेपछि मात्र त्यसमाथि डिस्क राखिन्थ्यो । अनि स्विच थिचेर रेकर्ड घुम्न थालेपछि त्यसको किनारामा बिस्तारै यन्त्रजडित सुई राखिन्थ्यो । अनि बज्न थाल्थे गीतहरू । डिस्कमाथि सुई घुक्ने मसिना घेरा हुन्थे, त्यही घेरामा गीत भरिएका हुन्थे । ती घेराहरू बीचमा कतै नजोडिई क्रमशः ठूलो आकारबाट सानासाना हुँदै जान्थे । बीचमा कथम्कदाचित कुनै घेरो टुट्यो भने त्यो घेरामा भएको गीतको त्यति पङ्क्ति मात्र बज्थ्यो ।
यसको एउटा रमाइलो स्मरण छ । त्यतिखेर अलइन्डिया रेडियोको ‘आकाशवाणी’ ले बुधबार र शुक्रबार दिउँसो आधा घन्टा नेपाली गीत प्रसारण गथ्र्यो । फ्रिक्वेन्सीले नभ्याएर हामी पूर्वतिर रेडियो नेपालको प्रसारण त्यति सुन्न पाउँदैन थियौँ । तर आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण रेडियो खर्साङले रिले गरिदिन्थ्यो र सजिलै सुन्न सक्थ्यौँ । हाम्रो घरमा रेडियो भित्रिसकेको थिएन । त्यसैले गाउँका एक जना रौसे मामाको घरमा पानासोनिक रेडियोमा हरेक बुधबार र शनिबार दिउँसो आकाशवाणीबाट प्रसारण हुने नेपाली गीत सुन्न धुइरो लाग्थ्यौँ । आकाशवाण्ीसँग रेडियो नेपालसँग जस्तो प्रशस्त गीत हुँदैनथे । किनभने उनले पनि रेडियो नेपालबाटै मागेर या किनेर गीत बजाउनु पथ्र्यो । त्यतिखेर दीप श्रेष्ठको ‘म पत्थरको देवता होइन, तोडिएर जोडिने’ बोलको गीत खुबै प्रसिद्ध थियो । त्यो गीत आकाशवाणीबाट नेपाली सेवा प्रसारण हुने दुइटै बार नबिराई बजाइन्थ्यो । सुरुसुरुमा त ठीकै थियो । तर अलिपछि त्यो गीतको एउटै हरफ ‘म पत्थरको दे’, ‘म पत्थरको दे’ मात्र बज्न थाल्यो । दुईतीनचोटि यसो भएपछि बल्ल पूरा गीत बज्थ्यो । पछि बुझ्दा त्यहाँनेरको घेरो टुटेर सुई त्यही घेरोमा मात्र घुम्दोरहेछ र यस्तो हुँदो रहेछ ।
त्यसबेलाका गीतहरू औसद तीन–सवा तीन मिनेटका हुन्थे । अहिलेका सीडी, डीभीडीमा जस्तो लामा र धेरै गीत अँटाउन सकिन्न्थ्यो । दुई किसिमका रेकर्ड हुन्थे– एलपी (लङ् प्लेयर) र इपी (एक्सेन्डेड प्लेयर) । एलपीमा बढीमा ४५ मिनेट र इपीमा बढीमा तीस मिनेटसम्म मात्र रेकर्ड गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । त्यतिबेलाका नेपाली गीतहरू छोटा हुनुको कारण यही थियो । तर कसरी हो उता हिन्दीमा मोहम्मद रफी र लगा मङ्गेशकहरूले गाएका लामा गीत पनि एउटै रेकर्डमा अटाउँथे । जब कि त्यस बेलाका प्रत्येक हिन्दी फिल्ममा छ–सातवटा गीत हुन्थे–हुन्थे ।
रेडियो प्रसारणमा बजाउने गीतहरू सुन्नलाई त रेडियो नै चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला घरमा रेडियो राख्नु आफैँमा महँगो विलासिताको कुरा थियो । त्यसैले गाउँघरमा पहाडतिर लाहुरेले घर फर्किंदा लगेका र मधेशतिर हुनेखाने एकाध जमिनदारका घरमा बाहेक अन्यत्र रेडियोले प्रवेश पाउन सक्तैन्थ्यो । अझ त्यसबेला हिजोआज सवारी साधनलाई जस्तै सरकारबाट लाइसेन्स लिएर मात्र घरमा रेडियो राख्न पाइन्थ्यो । त्यो रेडियो पनि बढेमानको बाकस जत्रै हुन्थ्यो । बोकेर यताउता राख्न पनि सकस हुने फिलिप्स कम्पनीको रेडियो सीमित सम्भान्त वर्गका घरहरूमा घन्किन्थे ।
तर बीसको दशकको अन्त्य र तीसको सुरुवाततिर जापानी पानासोनिक कम्पनीको चकलेटी रङको छालाको खोल भएको काँधमा भिर्ने सतङ्गो रेडियो बजारमा आयो । हिम्मत गरेर चार–पाँच मन धान या एक–दुई मन पाटा (सनपाट) बेच्दा किन्न सकिने सहुलियत प्राप्त भएपछि मानिसका काँधमा फाट्टफुट्ट रेडियो झुन्डिन थाले । तर अलि पछि त त्यो पानासोनिक रेडियो मानिसका काँधमा यसरी झुन्डिन थाले मानौँ त्यो उसको अङ्गरक्षक नै हो । हटिया जाँदा पनि काँधमा झुन्डेको छ । पिसाब फेर्न बाटाका छेउमा बस्दा पनि काँधमा त्यो झुन्डेकै छ । बिहान ब्यूँझेदेखि बेलुका ओछ्यानमा ननिदाएसम्म घन्केको छ, घन्केको छ । कतिपयका घरमा त सुन्दासुन्दै निदाएका मानिस रातभरि बजेको रेडियो बिहान ब्याट्री सिद्धिएर बज्न छोडेपछि हतारहतार ब्याट्री किन्न हटिया दौडेका दृश्यहरू पनि देखिन्थे ।
यसरी त्यस बखत पानासोनिक ट्रान्जिस्टर नामको रेडियो, रेडियो नहुनेहरूका अगाडि सान देखाउने एउटा गतिलै माध्यम बनेको थियो ।
यही सान देखाउने क्रममा मेरा एकजना छिमेकीले पनि दुई मन पाटा बेचेर एउटा पानासोनिक रेडियो किने । उनी गीत कति सुन्थे या समाचार कति बुझ्थे ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर भालेको डाकदेखि नसुतेसम्म त्यो चकलेटी पानासोनिक उनको काँध पिङ खेल्दै गाइरहेको हुन्थ्यो । एक दिनको कुरा हो । झम्के साँझ परिसेको थियो । घरघरमा टुकी, लालटिन बन्ल थालिसकेका थिए । घरको घेउको झाडीबाट गीत बज्न थाल्यो । गीत बज्नु त्यति अस्वाभाविक थिएन । तर त्यतिबेला चोरडाकाको जगजगी हुने मधेशमा अँध्यारो झाडीबाट गीत बज्नु स्वाभाविक थिएन । अनि आठ–दस जना लाठेहरू हातमा लाठीमुग्री बोकर टर्चलाइट बाल्दै पसे झाडीमा । झाडी छिचोल्दै गीत बजेको ठाउँमा पुगेर त्यो जमात रोकियो, त्यहाँ सबै जना हतप्रभ भए । उनीहरू मुख छोपेर हाँस्दै झाडीबाट निस्के । भएछ के भने ती छिमेकीले काँधमै रेडियो भिरेर, बन्द नगरी शौच गरिरहेका रहेछन् । त्यतिबेलाका मानिसमा पानासोनिक रेडियोको यस कोटिको मोह थियो ।
‘मौत की गोद मिल रही हो अगर, जागे रहने की क्या जरुरत है ।’ दर्द की खुद एक दास्ताँ थी मीना कुमारी
रम्बास कविता शैलीको काव्यिक भूकम्पः-